२०७८ भदौ २३ गते, बुधबार माता पाथिभराको दर्शन गरी राशिफल हेर्नुहोस् । - Desh Post
२०७८ भदौ २३ गते, बुधबार माता पाथिभराको दर्शन गरी राशिफल हेर्नुहोस् ।
२३ भाद्र २०७८, बुधबार ०७:०६ मा प्रकाशित (1 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
देश पोष्ट /काठमाण्डौं । २०७८ भदौ २३ गते, बुधबार माता पाथिभराको दर्शन गरी राशिफल हेर्नुहोस् । (चन्द्रमा कन्या राशिमा) ज्योतिष श्री देवराज बास्तोला (सम्पर्क नं. ९८४२९३२५९९)
१. मेष राशि (चु,चे,चो,ला,लि,लु,ले,लो,आ) मेष राशि हुनेहरुको लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ । स्वास्थ लाभ मिल्नेछ, मनमा उत्साह बढ्नेछ । सामाजीक काममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुको पढाईमा प्रगति होला । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभ मिल्नेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी पदोन्नती हुने, धन लाभ हुने अवसर मिल्ने छ ।
२. बृष राशि (ई,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो) बृष राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । आफन्तजन र सन्तान बाट प्रशन्नता प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा सफलता मिल्नेछ । व्यापारी वर्गका लागी अचानक धन लाभ हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी भ्रमणको अवसर प्राप्त होला, शुभ समाचार सुन्न पाईएला ।
३. मिथुन राशि (क,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,हा) मिथुन राशि हुनेहरुको लागी आजको दिन राम्रो देखिदैन, आफन्तजन संग वादविवाद पर्न सक्छ । यात्रा गर्दा वा सवारी साधन चलाउँदा संंयमता अपनाउनुहोला । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा वाधा अवरोध आउन सक्छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक हानी व्यहोर्नु पर्ला । नोकरी गर्नेहरुका लागी अपजस, अपमान सहनुपर्ला ।
४. कर्कट राशि (हि,हु,हे,हो,डा,डि,डु,डे,डो) कर्कट राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ, ईष्ट मित्र आफन्तजनबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ, टाढीएका आफन्त, मित्रहरु नजिक हुनेछन्, धन लाभ हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थीक बृद्धि हुने, धन लाभ हुने अवसर रहेको छ । नोकरी गर्नेहरुका लागी आर्थीक सुविधा प्राप्त हुने, काममा सहजता हुने छ ।
५. सिंह राशि (मा,मी,मु,मे,मो,टा,टि,टु,टे) सिंह राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । बोलीको प्रभावले धन लाभको अवसर मिल्ने देखिन्छ । मन प्रशन्न रहने छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभको अवसर प्राप्त होला । नोकरी गर्नेहरुको लागी पदोन्नतीको सम्भावना रहेको छ । सुखद समाचार सुन्न पाईएला ।
६. कन्या राशि (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) कन्या राशि हुनेहरुका लागी आजको आजको दिन राम्रो रहने छ, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुनेछ, मन प्रशन्न रहने छ । शुभ समाचार प्राप्त होला । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा रुची बढ्ने छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक लाभ हुने अवसर मिल्दछ । नोकरी गर्नेहरुका लागी काममा सहजता मिल्नेछ, कार्य सफल हुनेछ ।
७. तुला राशि (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तु,ते) तुला राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन त्यती राम्रो देखीदैन । खर्च हुने योग रहेको छ, लगानी गर्दा सतर्कता अपनाउनुहोला । मन परेको सामान गुम्न सक्दछ । विध्यार्थीहरुको लागी पढाईमा बाधा अवरोध आउन सक्छ । व्यापारी वर्गका लागी आर्थीक घाटा हुने योग रहेको छ । नोकरी गर्नेको लागी अपजस पाइएला ।
८. बृश्चीक राशि (तो,नाा,नी,नु,ने,नो,या,यि,यु) बृश्चीक राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन उत्तम रहेको छ । अर्थिक लाभ हुनेछ, मनमा प्रशन्नता रहनेछ । मान सम्मान प्राप्त हुन योग छ । विध्यार्थीहरुको लागी अध्यनमा रुची बढ्नेछ । ब्यापारी वर्ग हरुको लागी आर्थीक लाभ हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुको लागी मान, सम्मान र पदोन्नतीको अवसर रहने छ ।
९. धनु राशि (य,यो,भा,भी,भु,धा,फा,ढा,भे) धनु राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, नोकरिको अवसर प्राप्त हुनेछ । विध्यार्थीहरुको लागी पढाईमा विषेश अवसर प्राप्त हुने योग रहेको छ । व्यापारि बर्गको लागी आर्थिक उन्नती, प्रगती हुने अवसर प्राप्त होला । नोकरी गर्नेहरुको लागी काममा सहजता हुने योग रहेको छ ।
१०.मकर राशि (भो,जा,जी,खि,खु,खे,खो,गा,गी) मकर राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । भाग्योदय हुनेछ, अचानक धन लाभ हुनेछ । धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ, विध्यार्थीहरुका लागी अध्ययनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थीक सुधार हुने योग रहेको देखिन्छ । नोकरी गर्नेहरुका लागी काममा सहजता प्राप्त हुनेछ ।
११. कुम्भ राशि (गु,गे,गो,सा,शि,शु,से,सो,दा) कुम्भ राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन राम्रो देखिदैन । घाउ चोट लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुने सम्भावना भएकोले सावधानी अपनाउनुहोला । गरेका कामवाट अपजस पाईएला, आफन्त संग टाढीनु पर्नाले मन खिन्न रहनेछ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा बाधा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, व्यापारी वर्गको लागी आर्थिक अवन्नती हुने योग छ । नोकरी गर्नेहरुको लागी आफन्त संग बादविवाद हुने देखिन्छ, संयमता अपनाउनुहोला ।
१२. मिन राशि (दि,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) मिन राशि हुनेहरुका लागी आजको दिन मध्यम रहेको छ । धन लगानी गर्दा, हार्थीक लेनदेन गर्दा साबधानी अपनाउनुहोला । महिलाहरु संगको लेनदेनमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला, वाधा अवरोध पर्ने सम्भावना रहेको छ । विध्यार्थीहरुका लागी पढाईमा रुची बढ्ने देखिन्छ । व्यापारी वर्गको लागी आर्थिक अवस्था सामान्य रहनेछ । नोकरी गर्नेहरुको लागी विपरित लिंग संग वादविवाद पर्न सक्छ संयमता अपनाउनुहोला ।